Linguaskill Kwayedza Canada | BLI Zvikoro zveMitauro muCanada
Bvunzo dzeCambridge Linguaskill, semamwe mabvunzo epamutemo, dzinoongorora hunyanzvi hwese hweChirungu, kusanganisira kutaura, kuteerera, kuverenga nekunyora. Iyo bvunzo inoyera yako CEFR mwero (A1-C1) uye inogona kushandiswa kuratidza yako nhanho Chirungu kune vashandirwi, masangano edzidzo uye masangano ehurumende pasi rese.
BLI inomiririra Linguaskill's mumiriri. Iyo bvunzo inopa mhedzisiro chaiyo mukati memaawa makumi mana nemashanu uye iri nyore kutora; unogona kutora bvunzo panguva chero ipi kana nzvimbo, kunyangwe kumba.
Sarudza hunyanzvi hwaunoda kutarisa kana sarudza iyo bvunzo yakazara
Bhuku rako test
Gamuchira email ine mirairo uye kuronga bvunzo yako
Pazuva rakasarudzwa, tora muedzo online pamhepo yakachengetedzwa
Tora mhinduro dzako mumaawa makumi mana nemasere
Pinda mukati, Pindura mibvunzo, Tora mhinduro dzako mumaawa makumi mana nemasere
Nguva: 45 maminitsi
Nguva: 60 - 85 maminitsi
Nguva: maawa maviri nemaminetsi gumi nemashanu